March | 2011 | MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA
>The Reality of Myanmar National League(MNL) is To Make People Weak? – Article3March 26, 2011
Filed under: MY WRITING,SPORT — Nyo Gyi @ 2:56 pm
ပြည်သူတွေကို သွေးခွဲနေပြီလော၊ အာရုံပြောင်းနေပြီလော၊ လှည့်ဖြားရိုက်စားနေပြီလော (၃)
ဒီဆောင်းပါးနဲ့ဆိုရင် မြန်မာ့ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်မှာ ကျွန်တော်ရေးတဲ့ ဆောင်းပါး (၃)ပုဒ်ရှိသွားပါပြီ။
“MNL ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများဖြင့် ပြည်သူတွေကိုသွေးခွဲနေပြီလော၊ အာရုံပြောင်းနေပြီလော၊ လှည့်ဖြားရိုက်စားနေပြီလော” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ပါ။
ဒီတစ်ခါရေးချင်လာတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ ကနေ့ မြန်မာပြည်က အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကာ ကျင်းပနေတဲ့ AFC Challange Cup 2011 အတွက် ခြေစစ်ပွဲများမှာ မြန်မာအသင်းဟာ ဖိလစ်ပိုင်ကို ၁း၁ ဂိုးနဲ့ သရေကျ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ၂းဝ ဂိုးနဲ့ ရှုံး၊ ယနေ့(၂၀၁၁၊ မတ်၊ ၂၅) – ပါလက်စတိုင်းကို ၃း၁ ဂိုးနဲ့ ထပ်ရှုံးပြီး ခြေစစ်ပွဲမအောင်တဲ့အပြင် အသင်းအတွင်း၊ အသင်းနဲ့ ပရိသတ်အကြား စည်းလုံးချစ်ခင်မှုတွေ ပိုမိုပြိုကွဲလာခဲ့ရတာကြောင့်ပါပဲ။
ဖီဖာဥက္ကဌ ဆပ်ဘလတ္တာနဲ့ မြန်မာ့ဘော
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁၊ မတ်လ(၁၅)ရက်နေ့က Goal Project အစီအစဉ်နဲ့ မြန်မာပြည်ကို လာရောက်မဲဆွယ်သွားတဲ့ ကမ္ဘာ့ဘောအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ဆပ်ဘလတ္တာဟာ မြန်မာ့ဘောအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ဇော်ဇော်နဲ့ အတိုင်အဖောက်ညှိကာ(ဇော်ဇော်နဲ့ ဘာတွေအပေးအယူလုပ်ထားသလဲမသိ) –
“MFF ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဦးဇော်ဇော်၏ ဖိတ်ကြားမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခွင့်ရခဲ့သည့် အတွက် ၀မ်းသာပီတိ ဖြစ်ရပါကြောင်း၊ ဂိုးပရောဂျက် အစီအစဉ်များဖြင့် အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့သော အဆောက်အဦ၊ ဘောလုံးအကယ်ဒမီ အပါအ၀င် လူငယ်မျိုးဆက်သစ် ကစားသမားများကို အနာဂတ်အတွက် ပြုစုပျိုးထောင် လေ့ကျင့်ပေးနေမှုများမှာ ကျေနပ် အားရစရာကောင်းကြောင်း၊ တည်ဆောက်ဆဲ အားကစားကွင်းများမှာလည်း အလွန်ပင် အားရစရာ ကောင်းကြောင်းနှင့် အနာဂတ် မြန်မာဘောလုံး လောက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကောင်းမွန်သည့် အခြေခံ အဆောက်အဦများ ဖြစ်ကြောင်း၊ MFF ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော်သည် မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်ဟု ခေါ်သည့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လိဂ် ပြိုင်ပွဲကို ပေါ်ပေါက်လာအောင် ဦးဆောင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု သိရှိရကြောင်း၊ ယင်းကဲ့သို့ ပြုလုပ်မှုမှာ အလွန်ပင် ကောင်းမွန်သည့် လုပ်ရပ် ဖြစ်ကြောင်း”… မြှောက်ပင့်ပြောဆို အသံကောင်းဟစ်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ် ဖီဖာဥက္ကဌရာထူးအတွက် မဲဆွယ်ကာ ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။
ခက်တာက လက်ရှိမြန်မာ့ဘောလုံးရပ်ဝန်းအခြေအနေ၊ ဇော်ဇော်တို့အခြေအနေကို မြန်မာပြည်သူများကလွဲပြီး ဘယ်သူကများ ပိုသိနိုင်ဦးပါ့မလဲ။
မြန်မာဘောအသင်း၏ ဂုဏ်ယူဖွယ် ရလဒ်များ
အရှေ့တောင်အာရှဆူဇူကီးဖလားပြိုင်ပွဲ (AFF Suzuki Cup 2010)
ဗီယက်နမ် (၇-၁) မြန်မာ၊ စင်ကာပူ (၂-၁) မြန်မာ၊ ဖိလစ်ပိုင် (၀-၀) မြန်မာ
စုစုပေါင်းမြန်မာရမှတ် (၁)မှတ်၊ ရဂိုး (၂)ဂိုး၊ ပေးဂိုး (၉)ဂိုး
အုပ်စုအောက်ဆုံးအဆင့်နှင့် ပြိုင်ပွဲမှ ထွက်ရ
AFC Challange Cup (2011) ခြေစစ်ပွဲ
မြန်မာ (၁-၁) ဖိလစ်ပိုင်၊ မြန်မာ (၀-၂) ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ မြန်မာ (၁-၃) ပါလက်စတိုင်း
စုစုပေါင်းမြန်မာရမှတ် (၁)မှတ်၊ ရဂိုး (၂)ဂိုး၊ ပေးဂိုး (၆)ဂိုး
အုပ်စုအောက်ဆုံးအဆင့်နှင့် ခြေစစ်ပွဲမှ ထွက်ရ
ဖီဖာဥက္ကဌဆပ်ဘလတ္တာရေ… တကယ်အဟုတ်ကို အားရကျေနပ်စရာကောင်းလှတဲ့ မြန်မာ့ဘောလုံးအလားအလာပေပဲဗျာ။
“ခေတ်ပျက်မှာ သူဌေးလုပ်ရတာ လွယ်သကိုးဗျ”… ဇော်ဇော်၊ တေဇ၊ အောင်ကိုဝင်း၊ ဌေးမြင့်၊ လွင်မိုး အစရှိတဲ့ အာဏာရှင်နောက်မြီးဆွဲများ(သို့မဟုတ်) အာဏာရှင်များရဲ့ ဒိုးတူပေါင်ဖက်စီးပွားဖက် သူဌေးဆိုသူတွေကတော့ ဒီလိုပဲတွေးနေ၊ ပြောနေကြမှာ အသေအချာပါပဲ။ ခုခေတ်မှာ သူဌေးဖြစ်နည်းဖော်မြူလာကား “သာ+ပေါင်း-ညာ×စား” ပင်ဖြစ်သတည်း… လို့ဆိုရမလိုပါပဲ။ လက်ဝါးကြီးအုပ်စီးပွားရေး(ဇာဂနာတို့ရဲ့ သူတောင်းစားညီလာခံ ကဇာတ်ထဲကလို ပြောရရင်) ချီးပွားရေးစနစ်နဲ့ အုပ်စီးနေကြတဲ့ လူတစ်စုရဲ့ အင်အားဟာ မြန်မာပြည်မယ် ပိုမိုကြီးထွားလာနေပါပြီ။ “ဘယ်သူသေသေ- ငတေ၊ ငရွှေ၊ ငဇော်၊ ငမိုးမာ” ပြီးရောသမားတွေပေါ့ဗျာ။
ခက်တာက အဲဒီချီးပွားရေးသမားတွေက ဘာလုပ်သလဲဆိုတော့ကာ သူတို့ရဲ့ လိမ်လည်လှည့်ဖျားရိုက်စား ချီးပွားရေးကိစ္စတွေကို မြန်မာလူထု အာရုံမကျ၊ သတိမထားမိအောင် မြန်မာလူထုကို အာရုံတွေလွှဲတဲ့အနေနဲ့ အပေါ်ယံ ဗန်းပြ အလုပ်တွေ (ဥပမာ- MNL ဘောပွဲများ)လုပ်ပြီး ပြည်သူကို လှည့်စားဖို့ ကြိုးစားတော့တာပါပဲ။
ဘောလုံးလောက တိုးတက်မလာဘဲ လူလည်မသားတွေရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ကွက်တွေသာ ပိုမိုတိုးတက်လာ
ဒါကတော့ မြင်သာပါတယ်။ မြန်မာဘောလုံးအသင်း၊ ဘောလုံးလောက တိုးတက်မှုရှိမရှိဆိုတာ မြင်သာပါတယ်။ ပြည်သူကြိုက် ဘောလုံးဗန်းပြပြီးတဲ့ကာ ဇော်ဇော်အနေနဲ့ နေပြည်တော် ဘောကွင်းတည်ဆောက်မှုတွေ၊ မန္တလေး အားကစားကွင်းတည်ဆောက်မှုတွေမှာ လုပ်ကွက်တွေရသွားပါတယ်။ တေဇကတော့ ပြောမနေပါနဲ့တော့။ ဗမာပြည်က လုပ်ငန်းကြီးမှန်သမျှ သူနဲ့ကို မကင်းနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ သေချာ စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။ တကယ်တိုင်းပြည်ကို ချစ်မြတ်နိုးပြီး ဘောလုံးလောကကို မြှင့်တင်ချင်တာလား။ သူတို့ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက် ဘောလုံးကို ခုတုံးလုပ်နေကြတာလားဆိုတာကို သေချာစဉ်းစားအဖြေထုတ်စေချင်ပါတယ်။
အခြေအနေမကောင်းတဲ့ မြန်မာ့ဘောအဆင့်အတန်းကို ပြည်သူပရိသတ်တွေ ဒေါသထွက်နေချိန်မှာ လက်ရှိမြန်မာ့ဘောဥက္ကဌ ဇော်ဇော် ဘာလုပ်မယ်ထင်ပါသလဲ။ ထိုးကျွေးမှုတွေ လုပ်လာပါတော့မယ်။ လက်ရှိထိုးကျွေးစရာတွေလည်း အများကြီးရှိနေပါတယ်။ အာဏာရှင်ဆန်လှတဲ့ လက်ရှိဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကို ပြန်ပြော၊ ခံပြောရဲသူလည်း မရှိသလောက်ပါပဲ။ အရင်ဆုံး ထိုးကျွေးခံရမှာက လက်ရှိမြန်မာ့ဘောလက်ရွေးစင်ကစားသမားတွေပါ။ ဒီကစားသမားတွေကို ထိုးကျွေးပြီးရင် နောက်ထပ်ထိုးကျွေးခံရမှာက လက်ရှိ လက်ရွေးစင်နည်းပြချုပ် မီလန် ဇီဗာဒီနိုဗစ်ဖြစ်ပါတယ် (သူကလည်း သူ့အပြစ်တစ်စက်မှ မရှိသယောင် ကစားတွေအပေါ် အပြစ်ပုံချနေပါတယ်)။ နည်းပြကို ထိုးကျွေးပြီးရင် ဇော်ဇော်ဟာ သူ့ကိုသူ ထိုးကျွေးပါဦးမယ်။ လက်ရှိဘောအဖွဲ့ချုပ်က သူနုတ်ထွက်လိုက်ရင်လည်း သူ့အတွက် ဘာမှ မထိခိုက်ပါဘူး။ ဘောနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ချီးပွားရေးလုပ်ကွက်အတော်များများအပြင် အခြားလုပ်ကွက်ပေါင်းများစွာ ဇော်ဇော်ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတဲ့နောက် သူ့မှာ နစ်နာစရာအကြောင်း ဘာမှ မရှိတော့ပါဘူး။ ဟိုလူ့လက်ညှိုးထိုး၊ ဒီလူ့လက်ညှိုးထိုးနဲ့ပဲ မြန်မာ့ဘောလုံးဟာ ကျရှုံးမှုတွေထဲမှာ ရစ်ဝဲလယ်လယ်ဖြစ်နေပါတော့မယ်။
လက်ရွေးစင်ကစားသမားတွေကို ပြည်သူတွေ မမုန်းစေချင်
မြန်မာ့ဘောလုံး လက်ရွေးစင်ကစားသမားတွေဟာ အင်မတန်သနားစရာကောင်းပါတယ်။ သူတို့ကိုချည်း အပြစ်ဖို့နေတာ မမျှတပါဘူး။ မြန်မာဘောကစားသမားတွေရဲ့ ဘောလုံးအပေါ်ချစ်မြတ်နိုးစိတ်၊ နိုင်ငံ့အပေါ်ချစ်မြတ်နိုးစိတ်တွေကို ဇော်ဇော်တို့ဟာ MNL ဘောပွဲများကျင်းပပြီး စနစ်တကျ ဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါတယ်။ မီဒီယာတွေအနေနဲ့ မျက်စိမလျှမ်းစေချင်ပါဘူး။ လက်ရွေးစင်ကစားသမားတွေဟာ အာဏာရှင်တွေအုပ်ချုပ်အောက်မှာ စိတ်လက်မချမ်းမသာ ဘောလုံးကစားနေကြရတယ်ဆိုတာ မမေ့သင့်ပါဘူး။ သူတို့မှာ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာ ဘာမှ မရှိပါဘူး။ လွတ်လပ်စွာ ဘာမှ မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ဇော်ဇော်တို့က ၀င်ကန်ဆို ကန်ရတာပဲ။ မကန်ချင်လည်း ၀င်ကန်ရတာပဲ။ ကန်ချင်ပေမဲ့ မကန်နဲ့တော့ဆိုလည်း သူတို့ မကန်ရတော့ပါဘူး။ လက်ရွေးစင်ကစားသမားတွေဟာ နယ်ရုပ်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ လူတွေပါ။ သူတို့ ကန်ချင်စိတ်၊ ကြိုးစားချင်စိတ်ရှိမှ ဘောလုံးရလဒ်တွေ တိုးတက်မှာပါ။ သူတို့ကို မလိုတစ်မျိုး၊ လိုတစ်မျိုးဆက်ဆံခံနေရရင် သူတို့စိတ်ချမ်းသာ၊ စိတ်ဓာတ်တက်ကြွစွာ ဘောကန်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဘောလုံးသမားတွေလည်း ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူပြည်သားတွေနည်းတူ အာဏာရှင်တွေရဲ့ ညံ့ဖျင်းလှတဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှာ နေထိုင်အသက်ဆက်နေကြရတာပါ။ MNL ဘောပွဲတွေကျင်းပပြီး ကစားသမားတွေကို ငွေတွေပုံပေးနေရုံနဲ့ ဘောလုံးလောက တိုးတက်မလာနိုင်ပါဘူး။ စိတ်ဓာတ်တွေကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးနိုင်ရပါမယ်။ ခုတော့ ချီးပွားရေးစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ ဂွင်ဖန်ဖို့လောက် အားသန်တဲ့ ဇော်ဇော်တို့၊ တေဇတို့ရဲ့ အပေါ်ယံကြော-ရက်ရောမှုတွေဟာ ဘောသမားတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို မမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါဘူး။ ဦးဆောင်သူဆိုတာ စံပြဖြစ်ရပါမယ်။ ပြည်သူပြည်သားစီးပွားရေးသမားအများစုကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ကောင်းစွာမပေးဘဲ ချီးပွားရေးလက်ဝါးကြီးအုပ်ထားမှုတွေက ဇော်ဇော်၊ တေဇတို့ရဲ့ စိတ်ဓာတ်အဆင့်အတန်းကို ကောင်းစွာ မီးမောင်းထိုး ဖော်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ကျိုးရှာ အာဏာရှင်သမားများ၊ လက်ဝါးကြီးအုပ်စီးပွားရေးသမားတွေအောက်မှာ
ခုမြန်မာ့ဘောလုံးအသင်းကို လူငယ်တွေနဲ့ သွေးသစ်လောင်းတော့မယ်ဆိုပြီး လေသံပစ်နေပါတယ်။ ကိုယ်ကျိုးရှာ အာဏာရှင်သမားများ၊ လက်ဝါးကြီးအုပ်စီးပွားရေးသမားတွေအောက်မှာ ဒီလူငယ်တွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေကိုရော ဘယ်လို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ဦးမှာလဲ။ “လူငယ်တွေ … မင်းတို့လည်း လူလည်ကျတတ်အောင် သင်ကြဦး”… ဆိုပြီး စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ပေးကြမှာလား။
ဖီဖာနဲ့ ဖီဖာဥက္ကဌလည်း လူလည်ပါပဲ
ကမ္ဘာ့ဘောအဖွဲ့ချုပ်ဖီဖာဥက္ကဌဟာလည်း လူလည်ပါပဲ။ သူ့အကျိုးစီးပွား၊ ဖီဖာအကျိုးစီးပွားကိုပဲ သူကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ ဘောအဖွဲ့ချုပ်တွေကို အစိုးရက ၀င်စွက်ရင် ဖီဖာက အရေးယူလေ့ရှိသတဲ့။ ဗမာ့ဘောအဖွဲ့ချုပ်ကိုရော ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ အစိုးရက ၀င်စွက်စရာ မလိုတော့လောက်အောင်ကိုပဲ ဗမာ့ဘောအဖွဲ့ချုပ်မှာ အာဏာရှင်အစိုးရလူတွေက လက်ဝါးကြီးအုပ်နေတာကိုးဗျ။ ဒါမျိုးကျ ဖီဖာက မျက်စိမှိတ်မသိချင်ယောင် ဆောင်နေရောလား။ နည်းပြဟာ သူ့စိတ်ကြိုက် ကစားသမားရွေးချယ်ခွင့်ရှိသလား။ သူ့စိတ်ကြိုက် သူ ဘာလုပ်နိုင်မလဲ။ ကစားသမားတွေကရော သူတို့စိတ်ကြိုက် ဘာလုပ်နိုင်ခွင့် ရှိပါသလဲ။ ရယ်စရာအတော်ကောင်းတဲ့ သပွတ်အူတွေပါပဲ။ ဖီဖာရဲ့ Goal Project တွေနဲ့တင် ဒီသပွတ်အူတွေ (ဖီဖာဥက္ကဌနဲ့ အပေါင်းအပါများ+ဗမာ့အာဏာရှင်များ+ဗမာ့ဘောအဖွဲ့ချုပ်+လက်ဝါးကြီးအုပ်ချီးပွားရေးသမား)တွေ အတော်ကြီးပွားဦးမှာ မြင်ယောင်နေသေးပါရဲ့။
မြန်မာ့ဘော တိုးတက်ဖို့ ဘယ်လောက်ထပ်စောင့်ဆိုင်းရဦးမှာပါလဲ။ ချီးပွားရေးအကြံနဲ့ ဘောဗန်းပြတဲ့ ဇော်ဇော်၊ တေဇတို့ လူလည်မသားတစ်သိုက်ခြယ်လှယ်နေသ၍၊ အာဏာရှင်များရဲ့ ကိုယ်ကျိုးရှာအုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှာ မြန်မာပြည်နေနေရသ၍ မြန်မာ့ဘောလည်း တိုးတက်လာဖို့ လမ်းမမြင်လှပါ။ ဘောလုံးလောကကိုတိုးတက်စေချင်ရင် ဘောလုံးကို တကယ်ချစ်သော၊ အားကစားကို တကယ်မြတ်နိုးသော အစိုးရ၊ ဘောအဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ စစ်အင်အားအသုံးစရိတ်ကိုပဲ တိုးချဲ့ပြီး ချီးပွားရေးလက်ဝါးကြီးအုပ်သမားတွေနဲ့ ဒိုးတူပေါင်ဖက် ပူးပေါင်းလူလည်ကျနေတဲ့ အာဏာရှင်များ တည်မြဲနေသ၍ မြန်မာ့ဘောလုံးတိုးတက်လာဖို့ဆိုသည်မှာ “အိပ်ပေါက်နဲ့ ဖားကောက်” တဲ့ စကားပုံထက်ဆိုးစွာ “စိတ်အပေါက်တွေနဲ့ အယားဖျောက်” သလိုသာ ဖြစ်နေမယ့်အကြောင်း စာပန်းဆင်လိုက်ရပါတော့တယ်။ ။
(၂၆၊ မတ်၊ ၂၀၁၁)
>Pan Hlaing Soe (Kyone Pyaw)’s Poem for Feminized Than Shwe March 20, 2011
Filed under: OTHERS' POEMS,PHOTOS,SATIRE — Nyo Gyi @ 9:46 am
The YATI ရတီ စာပေအနုပညာ မဂ္ဂဇင်း Vol. 8, No.84, March, 2001 မှ ကဗျာဆရာ ပန်းလှိုင်စိုး (ကျုံပျော်) ၏ ” ဖတ်ပြီးသားကို ထပ်ဖတ်ခြင်း “ ကဗျာအား ဆက်စပ်ခံစားနိုင်ရန် မျှဝေ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ (ပူးတွဲပါပုံ)
ယောက်ျားစစ်စစ်က မိန်းမဖြစ်သွားတာတော့ ဆန်းတယ်.. တဲ့။ ကဗျာဆရာ ဖွဲ့ဆိုထားတာပါ။
>Acid Rain Rumors Spread also in Burma after Japan Nuclear Power Plant Explosion March 15, 2011
Filed under: MY NEWS — Nyo Gyi @ 7:05 am
ဂျပန်ငလျင်နှင့် ဆူနာမီလှိုင်းများအပြီး ဂျပန်နျူစက်ရုံပေါက်ကွဲမှုကြောင့် အက်စစ်မိုးရွာနိုင်ကြောင်း
သတိပေးစာများ ဗမာပြည်တွင်းပျံ့နှံ့၊ ပြည်သူများ ထိတ်လန့်
“A nuclear power plant in Fukumi, Japan exploded at 4:30 Am today. If it rains tomorrow or later, dont go outside, be sure that you have rain protectors.
Its acid rain. Dont let it touch you. You may burn ur skin, lose ur hair or hav cancer. This applies to all asian countries. Pls pass and safety and remind everyone you know”
စာသားများပါဝင်သော Text Message များသည် လက်ကိုင်ဖုံးကိုင်ဆောင်သော မြန်မာပြည်သူများအကြား ယမန်နေ့ကတည်းကပင် ပျံ့နှံ့နေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုအခါ အဆိုပါ သတင်းစကားများသည် ဗမာပြည်က လူတိုင်းလိုလို၏ ပါးစပ်ဖျားတွင် ရေပန်းစားကာ ပြည်သူများ ထိတ်လန့်တကြား ဖြစ်နေကြကြောင်း ကြားသိရသည်။
ယင်းသတင်းစကားသည် အမှားကြီးဖြစ်ပြီး Fukumi တွင် မည်သည့်နျူးကလီးယား စက်ရုံမှ မရှိဘဲ Japan နိုင်ငံ၊ Fukushima ရှိ နျူးကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံတွင်သာ ဂျပန်ငလျင်၊ ဆူနာမီဒဏ်များအပြီး အအေးပေးစနစ်ပျက်ယွင်း၍ ပေါက်ကွဲမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ နျူးကလီးယားစိမ့်ယိုရာမှ ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်းများပျံ့နှံ့ခဲ့လျှင်လည်း ရက်ပိုင်းမျှသာ ကြာမည်ဖြစ်ပြီး အက်စစ်မိုးနှင့် မည်သို့မျှ မသက်ဆိုင်ကြောင်း၊ အက်စစ်မိုးရွာရခြင်းမှာ လေထုညစ်ညမ်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း၊ အက်စစ်မိုးရွာသည်ဆိုလျှင်တောင် အရေပြားလောင်၊ ဆံပင်ကျွတ်၊ ကင်ဆာဖြစ်စေသည်ဆိုခြင်းများမှာလည်း အခိုင်အမာ သက်သေပြချက်များ မရှိသေးကြောင်း၊ ယင်းအက်စစ်မိုးကိစ္စသည် ကောလဟလသာ ဖြစ်ပြီး ရေးသားထားသော စာသားများတွင်လည်း စာလုံးပေါင်း၊ ဂရမ်မာ အမှားများပါရှိပြီး ရေးထားသမျှမှာ အရည်မရအဖတ်မရများသာဖြစ်ကြောင်း ကို
အဆိုပါ ရှင်းပြချက်ကို အဆိုပါအင်တာနက်လိပ်စာမှ အပြည့်အစုံ ကူးယူဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
Location: In front of my ASUS F8V notebook!
Explosion At The Nuclear Power Plant In Fukumi, Japan
Some idiot started sending out this fake SMS to everyone today :
A nuclear power plant in Fukumi, Japan exploded at 4:30 am 2day. If it rains 2mor or later, dn’t go outside,bsure tat u have rain protectors. It’s acid rain. Dont let it touch u. u may burn ur skin, lose ur hair or have cancer. Pls pass, stay safe n remind everyone u knw
The bad grammar and spelling aside, this SMS is full of nonsense.
1. There is no nuclear plant in Fukumi. In fact, as far as I can tell (on Google Maps), there is no such place as Fukumi in Japan!
2. The nuclear plant that is having trouble cooling down its reactors is the Fukushima Daiichi nuclear plant.
3. Two of Fukushima Daiichi nuclear plant’s reactor buildings have already exploded – one on Saturday (Reactor 1) and one on Monday (Reactor 3). So there was not just one explosion. There was TWO explosions.
4. In both cases, it was caused by an explosive mix of hydrogen, oxygen and heat from the reactors. In both cases, only the walls and ceilings of the reactor buildings were blown away. The reactors themselves were not damaged by the blast.
5. The Fukushima Daiichi nuclear plant usesacompletely different design from Chernobyl. It’saboiling water reactor (BWR). Chernobyl used the more dangerous RBMK (graphite moderated reactor) technology. So the Japanese reactors are not going to explode like Chernobyl, and nuclear scientists have said so.
6. Even if it somehow explodes like Chernobyl, any radioactive fallout will follow wind currents and will take days, if not weeks, to spread. In other words, it’s not going to be raining down on you tomorrow…
7. Acid rain has nothing to do with nuclear fallout. We get acid rain all the time due to air pollution. As bad as acid rain is, it has not been proven to burn the skin, cause you to lose your hair or give you skin cancer.
>PhotoCamp Mandalay 2011 will be held on 20, March, 2011 March 11, 2011
Filed under: OTHERS' NEWS,PHOTOS — Nyo Gyi @ 3:01 pm
BarCamp တွေနဲ့အပြိုင် PhotoCamp လာပြီ
>Maung Thee Thant’s Tribute Poem For Poet Kyi Aung March 5, 2011
Filed under: OTHERS' POEMS — Nyo Gyi @ 6:49 am
>Vol:3, No:6, ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မတ်လထုတ်၊ Mandalay ICON Magazine (မန္တလေး အထင်ကရမဂ္ဂဇင်း) စာမျက်နှာ ၁၄၉ ပါ မောင်သီးသန့် ရဲ့ “ဟဲဗီးဝိတ် ကဗျာဆရာသို့” ကဗျာအား ကူးယူ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ သွားလေသူ ပြည်သူ့ဘက်တော်သား ကဗျာဆရာကြီး ဆရာ (ဦး) ကြည်အောင် ကို ဂုဏ်ပြုထားတဲ့ အလွမ်းပြေကဗျာပေါ့…။